Myanmar Youth Media Club - SZ Interview | SZ အင်တာဗျူး
PoorBest SZ Interview | SZ အင်တာဗျူး
Saturday, 06 June 2009 00:08	Written by Administrator	Inverview_sec	- Interviews	TwitterSocButtons v1.4
SZ နှင့် အင်တာဗျူး
ကို SZ ရေ မင်္ဂလာပါ ရှင်။ အနော်ကတော့ MYMC interview team က interviewer Fairy ပါရှင်။ ပထမဆုံး ကိုSZ နာမည်ရယ် ၊မွေးနေ့ ရယ်အသက်ကိုပရိတ်သတ်ကြီး သိအောင်တချက်လောက်ပြောပြ ပေးပါအုံးနော်။ ဟုတ်… အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်နာမည်အရင်းက ရွှေဇံမျိူးဟိန်း ပါ။ မွေးနေ့က ၁၉၈၉ July ၂၀ပါ။ အသက်ကတော့အခုလာမဲ့ July မှာ ၂၀ ပြည့်မှာပါ။
ကိုSZ ရဲ့ဒီ SZ ဆိုတဲ့ nick ကို ဘယ်လိုပေးဖြစ်သွားလဲ ဆိုတာလေးလဲ တချက်လောက် ပြောပြပေးပါအုံးရှင့်။ အမ်….. SZ ဆိုတာ STREETZ ရဲ့ ရှေ့ဆုံးက S နဲ့ နောက်ဆုံးက Z ကိုယူထားတာ..S ရယ် Z ရယ်ပေါ့။ SZ.. Street ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ကို SZ က ရခိုင်လူမျိုးလို့ သိရတယ်နော်..အဲ့ဒါ ဟုတ်လား မသိဘူးရှင့်။ ဟုတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က တိုင်းရင်းသားပါ။ ကျွန်တော် ရခိုင်လူမျိုးပါ။
ကို SZ လောလောဆယ် ပညာရေးအတွက် ဘာတွေ လှုပ်ရှား နေလဲမသိဘူး နော်။ ပညာရေးအတွက်က ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်ပြီးထည်းက ကျွန်တော် သီချင်းစဆိုတာပါ။ ၁၀တန်း အောင်းပြီး တော့ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲကို ဆက်မဖြေဖြစ်ဘူး။ ဟိုသင်တန်း ဒီသင်တန်း ဟိုသင်တန်းရှောက်တက်လိုက် ဒီသင်တန်းရှောက်တက်လိုက်..ဒါပဲ။ ဒါပေမဲ့... ကျွန်တော်ဒီ နှစ်တော့ ပြန်ဖြေ မယ်လို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားထားပါတယ်။
အခုဆိုရင် အကိုရော နောက် B.L.F family ရောပါလူတွေက အရမ်းသိလာ ကြတယ်နော်။ အဲ့ဒီ့အပေါ်မှာအကို ကျေနပ်အားရမှုရှိရဲ့လား။ အကိုကြိုးစား သလောက်ပြန်ရဲ့ တယ်လို့အကိုထင်လား။ ကျွန်တော်တို့ဒီ Street Dream Mix tape ထွက်သွားပြီးထည်းက ကျွန်တော်တို့ သီချင်းတွေကို Show ပွဲမှာဆိုရင် အောက်ကလိုက်ဆိုကြတယ်.. ပြီးတော့ အရင်ကထက်စာရင် ဒီ B.L.F က လူတွေအားလုံးကိုပိုပြီးတော့ သိသွားကြတယ်။ ကျေနပ်ရဲ့လားဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ့ထက်အများကြီး ပိုပြီးအောင်မြင် ချင်သေးတယ်.. ဒီ့ထက်အများကြီးပိုပြီး သီချင်းတွေကိုလုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့အခု ရထားတဲ့ နေရာတခုအတွက်နဲ့ ကျွန်တော် ရောင့်ရဲနိုင်တယ် ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက step by step ပဲသွားမှာပါ။
အကိုဒီ Hip Hop လောကထဲကို ဘယ်တုံးကစပြီး ၀င်ရောက်ခဲ့လဲ မသိဘူးနော်။ ဟုတ်.. ကျွန်တော် သီချင်းဆိုချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ကျောင်းသား ဘ၀ထဲက ဆိုချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်စဆိုဖြစ်တာတော့ ကျွန်တော် ၁၀တန်းပြီးမှပေါ့။ 2004 လောက်ကမှ ကျွန်တော်စပြီးတော့သီချင်းစလုပ်ဖြစ်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဒီ Hip Hop လောကထဲကိုစ၀င်တဲ့အချိန်မှာ Rapper တယောက်မဖြစ်ခင် ကျွန်တော် အရင်ဆုံး DJ စလုပ်တာပေါ့.. အဲ့တုန်းကကျွန်တော် DJ Arkar Bo ဆီမှာ DJ အရင်သင်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်သီချင်စဆိုဖြစ်တာပါ။
ဒီ B.L.F. family မှာ လေ member ဘယ်နှစ်ယောက် ပါဝင်ပြီးတော့ ၊ ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲ ဆိုတာလေးကိုလဲ တချက်လောက်ပြော ပေးပါအုံးနော်။ ဒီ B.L.F family မှာ ကို Soe Gyi ရယ်၊ ကိုနီတွတ် ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ Double T ရယ်၊ Hein Myat ရယ်၊ Lil KiKi ရယ်၊ Mi Sandi ရယ်.၊ါအခုအားလုံးသီချင်းဆိုနေကြတဲ့ လူ ၇ ယောက်ပေါ့.. နောက်ပြီးသီချင်းမလုပ်သေးတဲ့ member တွေရယ် နောက်ပြီး သီချင်း မလုပ်တော့တဲ့ member တွေလဲရှိတယ်။ B.L.F ကို Brotherhood Style နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။
အကိုရယ်, ကို Soe gyi ရယ်, နောက်ပြီးတော့ကိုရဲလေး ရယ် အတူဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လေ... မမြင်ကွယ်ရာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး။ အဲ့သီချင်းလေးကို လူကြိုက်တော်တော်များကြတယ်နော်။ အဲ့သီချင်းလေးကဘယ်လို idea ရပြီး ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားလဲ ဆိုတာလေးလဲ တချက်လောက်ပြောပေးပါအုံးနော်။
အဲ့သီချင်းက အမှန်တကယ်က ကျွန်တော်နဲ့ ကို Soe Gyi နဲ့ တယောက်တချန်းအခွေထဲကသီချင်း..Online ကနေတဆင့်ပြန့်သွားတာ။ Idea ကတော့ ကောင်မလေးက ကောင်းလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတယ်... ကောင်လေးကကောင်မလေး သူ့အနားမှာ မရှိတော့ပေမဲ့ သူ့ရင်ထဲက ကောင်မလေးနေရာကိုဘယ်သူ့ကိုမှ အစားမထိုးနိုင်ဘူး.. အစားမထိုးနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို ၃ ယောက်မှာလဲအဲ့လိုခံစားချက်ရှိတယ်.. အဲဒါကြေင့် အဲ့သီချင်းကိုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အဓီက ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။
အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Hip Hop လောကထဲမှာ rapper မလေးတွေလဲ ခေတ်စားလာကြတယ်နော်.. အကိုတို့ အဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်.. B.L.F မှာဆို Mi Sandi ရှိတယ်ပေါ့နော်.။ နောက်ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်း အရမ်းခေတ်စားလာတာ Bobby Soxer ပေါ့.. ဆိုတော့အဲ့ဒီ rapper မလေးပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကို ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့.. နောက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေပေါ်ကိုရော အကိုဘယ်လို သုံးတတ်လဲ.. ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ တချက်လောက် ပြောပြပေးပါအုံးနော်။
ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ ဒီမှာကမိန်းကလေးထဲမှာ rap ဆိုတဲ့လူက လက်ချိုးရီလို့ရသေးတယ်လေ.. အရမ်းနည်းသေးတယ်ဗျာ..ပြောရရင်။ အဲ့တော့ Mi Sandi ကိုလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်.. Bobby Soxer ကိုလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး မိုက်တယ်ဗျာ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကောင်တယ်.. Rapper မလေးတွေမှမဟုတ်ဘူး.. အခု rapper ချာတိတ်လေး ရှိတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက ၈ တန်း၊ ၉ တန်း၊ ကလေးအရွယ်လောက်ထဲက အလားအလာကောင်းတဲ့ rapper လေးတွေရှိတယ်. သူတို့က နောင်တချိန်ကြရင် Hip Hop လောကကိုဦးဆောင်နိုင်မဲ့ Hip Hop လူသားတွေဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကောင်းပါတယ်.. အားလုံးပဲအခုလိုကြိုးစားတာ။
Gangster rapper ဆိုတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ... အကို gangster rapper တယောက်အစစ်ဆိုတာ ဘယ်လို လို့အကိုထင်လည်း။ Gangsta rapper ဆိုတာက နံပတ် ၁ အချက်.. Gangsta rap ကိုဆိုရမယ်။ နံပတ် ၂ အချက်.. သူဆိုလိုက်တဲ့စာသားတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးကို ပြသာနာတွေ အားလုံးကို သူဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်။ (e.g.) သီချင်းထဲမှာ ဆဲနေပြီးတော့ အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့ တောင်းပန်နေရတာမျိုးက လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး.. Gangster rapper ကအရမ်း shock ရှိတယ်။
ဒီ B.L.F family ထဲမှာလေ အကိုနဲ့ကို Soe Gyi က တော်တော်လက်တွဲဖြစ်တယ်လို့ ကြားရတယ်နော်.. ပြီးတော့သီချင်းတွေလဲ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကြားတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ အကိုနဲ့ကို Soe Gyiနဲ့က ဘယ်လိုစတွဲတယ်..နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီလောက်အချိန်အထိ အကြာကြီးထိပေါ့နော်.. လက်တွဲခိုင်ခိုင်နဲ့ဆက်တွဲတယ်.. အဲ့ဒါလေးလဲ တချက်လောက်ပြောပြလေးပါအုံးနော်။
ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက်က အခုမှတွဲတာမဟုတ်ဘူး.. ကျွန်တော် တို့ဒီ..ကျွန်တော် သီးချင်းစလုပ်ထဲကပေါ့ ကျွန်တော် နဲ့သူနဲ့ စတွဲတာ..ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်က ညီအကိုအရင်းတွေ ထက်တောင်ပိုပြီးတော့တွဲဖြစ်တယ်.. 2004 လောက်ထဲကပေါ့။ သူကကျွန်တော် ရဲ့ Big Brother ဆိုရင်လည်းမမှားဘူး.. သူကကျွန်တော်ကို beef လုပ်တဲ့လူတွေ.. ကျွန်တော်ကို diss လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကို ကျွန်တော် ဘက် ကနေပြီးတော့ diss ပြန်လုပ်ဖို့ကိုလဲ ၀င်မလေးဘူး.. ဘယ်တော့ မှလဲဝင်လေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဆိုးအတူ ကောင်း ဖက်တွေ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အမြဲတန်း လက်တွဲသွား မှာပါ။ ဒီfamily ထဲမှာပေါ့နော်.. သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ရှိလားမသိဘူးနော်။ ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး အကိုဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်.. အဲ့ဒါလေးလဲ တချက်လောက် အနော်တို့ကို သိအောင်ပြောပြပါအုံးနော်။ Family ထဲမှာ ဒီသဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာတော့ အရမ်းဖြစ်ခဲတယ်။ ရှိလားလို့ရှိရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ ဖြေရှင်းတယ်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုပဲလုပ်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ familyက တယောက်နဲ့တယောက် မကျေနပ်တာရှိရင်လဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်စံတယ်။ ကျွန်တော်တို့ family ထဲကလူတွေထဲမှာ ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူး။ အကယ်လို့ ဒီ familyထဲက လူတယောက်က ထိပ်ဆုံးကို ရောက်သွားခဲ့မယ် ဆိုရင်လဲ ဒီကိုယ့် family ထဲကလူတွေကိုအမြင့်ဆုံး ကိုရောက်အောင် လက်တွဲခေါ်သွားမှာပါ.. အဲ့ဒါသေချာတယ်။ အကိုတို့ဒီ Frenzo Production နဲ့ B.L.F family နဲ့လက်တွဲဖြစ်တယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲ့ဒါဟုတ်လား မသိဘူးရှင့်။
ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော်တို့နဲ့ Frenzo Production နဲ့လက်တွဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ကို Soe Gyi နဲ့ တယောက်တချမ်းအခွေကို Frenzo Production ကထွက်မှာ..ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါဆိုအကို Frenzo အတွက် သီချင်းဆိုထားပြီးတာတွေ ရှိပြီလားမသိဘူး။ ဟုတ်..ရှိတယ်။ အယ်.. ကျွန်တော်Frenzo Production အတွက်သီချင်းဆိုထားတယ်.. သီချင်းနာမည်က နဂါးတစ်ကောင်.. အဲ့သီချင်းက ကျွန်တော်တို့ B.L.F ရယ် ကျွန်တော်တို့ B.L.F နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လူတွေအားလုံးဆီမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်.. ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ အတွက် နဂါးတစ်ကောင်လို စိတ်ဓာတ်ရယ် နဂါးတစ်ကောင်လို ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို.. ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်း နေတဲ့ Haterzတွေ သိဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့သီချင်း။ အဲ့သီချင်း ကိုစင်ပေါ် မှာဆိုတိုင်း ကျွန်တော် အမြဲတန်းဂုဏ်ယူတယ်။
နောက်ပြီးတော့လေ.. V.I.P ပေါ့နော်.. အခုဆိုရင် RockStar.. ဒီ RockStar နဲ့ အကိုတို့ B.L.F နဲ့Album တခုထဲမှာထုတ်မယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်.. B.L.F က one side ၊ RockStar က one sideပေါ့.. အဲ့လိုမျိုး one side ဆီalbum တခုထဲမှာထုတ်မယ်ဆိုတာ သတင်းကြားတယ်.. အဲ့ဒါဟုတ်လား မသိဘူးရှင့်။ ဟုတ်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရယ် RockStar ရယ်နှစ်ဖွဲ့ထည်းမဟုတ်ဘူး.. B-Lord ရယ် G Family ရယ် RockStar ရယ် ၃ ဖွဲ့.. ဒီအခွေကိုစလုပ်ဖို့အတွက် Ah Boy ကနေအရင်စပြီးကမ်းလှမ်းတာ.. အဲ့အခွေကအခုအားလုံးပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ ခြွင်းချက်နေနဲ့ဒီအခွေထဲမှာ Jouk Jack မပါဘူး။
အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ လူငယ် rapper လေးတွေကိုရော အကိုဘယ်လိုများ အကြံညံပေးချင်ပါလဲ။ ဘယ်လိုအကြံညံပေးချင်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီသီချင်းစဆိုမယ် ဆိုပြီးတော့ လုပ်တန်းက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာအဆက်အသွယ်မှမရှိဘူး.. ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူနဲ့မှလဲမသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်မကြခဲ့ဘူး.. ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်.. အဲ့လိုပဲ..အားလုံးပဲကြိုးစားပါလို့.. စစ်မှန်တဲ့လူတိုင်းအတွက်က နေရာတစ် နေရာကအမြဲရှိမှာပါ။ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့တိုင်းလဲ စိတ်ဓာတ်ကြစရာမလိုဘူး.. တကယ်ကြိုးစားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ တနေ့နေ့ကြရင် စင်ပေါ်ကိုရောက်လာမှာပါ။ Real MC တစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေက ဘာလို့များအကိုထင်ပါလဲရှင်။ အင်.. MC ရဲ့စာလုံးအပြည့်အစုံက Master of Ceremony။ Real MC တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. စင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့အာရုံက အဲဒီ့ကထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်.. ဥပမ MC တစ်ယောက်က အားလုံးလက်ကို တူတူမြှောက် လိုက်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာ.. သိတယ်မှတ်လား.. အောက်ကလူတွေ အားလုံးကလဲလက်လိုက်မြှောက်တာမျိုး.. အဲ့ဒါမျိုးပေါ့.. Rapper တိုင်းက MC လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။
ဒါဆိုအကိုက ကိုယ့်ဟာကို Real MC တယောက်ဖြစ်တယ်.. Real MC တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ လက်ခံလိုက်ပြီလား။ ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစား.. အကို့ကြိုးစားမှု လိုသေတယ်လို့ အကိုထင်ပါသလား။ ဒီမေးခွန်အတွက်ကတော့ ပရိတ်သတ်ကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အနော်တို့ဒီ online radio station တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MYMC နဲ့ ဒီ MYMC interview Team ကို ဘယ်လိုများ အကြံဥာဏ် ပေးချင်ပါလဲရှင်။ ကျွန်တော်ကအဓိက ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ ဒီ underground ထဲက rapper တွေကို interview တဲ့အစီစဉ်ကို ကျွန်တော်အ ရမ်းကြိုက်တယ်.. ပြီးတော့ မေးတဲ့မေးခွန်တွေကိုကြိုက်တယ်. အခုလိုမျိုးအစီစဉ်တွေရှိတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
အကိုဒီ interview လေးကနေတစင့် အကို့ကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဘာများစကားလက်ဆောင် မှာချင်ပါသေလဲရှင်။ ဒီ... ကျွန်တော်တို့... ဒီ show ပွဲတွေမှာ... ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်... ဟို... ကျွန်တော်တို့ B-Lord ကဆိုမယ် ဆိုရင် အမြဲတန်းအောက်က လာအားပေးတဲ့လူတွေ.. ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ rapper တွေ.. သူတို့အားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ အားပေးတဲ့လူတွေရှိနေသရွေ့ ကျွန်တော်တို့ဖက်က ကျွန်တော်သီချင်တွေကိုအမြဲအဆင့်မှီအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျွန်တော် တို့ကြိုးစားမယ်... ပြီတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကို Soe Gyi နဲ့နှစ်ယောက်တွဲအခွေကို အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့.. Thank You ပါ။ အခုလိုမျိုး အနော်တို့ MYMC စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဒီလိုမျိူးပေါ့နော် ဖြေကြားပေးတဲ့ကို SZ ကိုအနော်တို့က အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အကိုဒီ့ထက်ပိုပြီး တော့ အောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုယ်စား အနော်တို့ MYMC ကပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Thank You ပါ..ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။ ကျွန်တော်ကလဲ MYMC ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
MYMC Interview TeamInterviewer - V aka FairyWriteup/Questions - V, Bizz, Yuki, CutyEaintManagement - CutyEaint
Content View Hits : 8510686